भारत–पाकिस्तान द्वन्द्व : नेपाल समस्यामा ! - Jhilko
भारत–पाकिस्तान द्वन्द्व : नेपाल समस्यामा !
नेपालको महत्वपूर्ण छिमेकी देश भारत र पाकिस्तानबीचको द्वन्द्व चरम उत्कर्षमा पुगेको छ । अघिल्लो महिना भारत प्रशासित जम्मु–काश्मीर क्षेत्रको पुलवामा आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मदको आक्रमणमा ४४ जना भारतीय सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएपछि भारत पाकिस्तानबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो । भारतले जैश ए मोहम्मद नामक आतंकवादी संगठनलाई पाकिस्तानले आश्रय दिएको आरोप लगाएको छ भने पाकिस्तानले भारतको आरोप अस्वीकार गर्दै आइरहेको छ ।
घटनापछि भारतीय लडाकू विमानले पाकिस्तान प्रशासित बालाकोट लगायतका विभिन्न स्थानमा आक्रमण गरे भने जवाफमा पाकिस्तानले भारतीय लडाकु विमानलाई प्रहार गरेर खसालेको छ । जैशको आक्रमणपछि भएका कारबाहीमा पनि भारत र पाकिस्तानले आआफ्नो दावी पेश गरेका छन् । जुन कुरा स्वतन्त्र रुपमा पुष्टि हुन सक्ने अवस्था छैन् । दुवै तर्फ मानवीय क्षति मात्र होइन भौतिक क्षति समेत दिनप्रतिदिन भइरहेको छ । युद्धविरामको उल्लंघन गर्दै एकले अर्काको जमिनमा आक्रमणका सिलसिला निरन्तर चलाइरहेका छन् ।
भारतमा संसदीय चुनाव आउन अब केही हप्ता मात्र बाँकी छ । भारतको चुनावी एजेण्डा सधै पाकिस्तान बिरोधी रहँदैं आएको छ । पुलवामा आक्रमणपछि प्रमुख सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी भाजपा र सत्ता बाहिरका दलको एजेण्डा पनि यही भएको छ । त्यसैले तत्काल नै भारत पाकिस्तानबीच पहिले जस्तो शान्ति कायम हुने अवस्था देखिदैंन । विभिन्न राज्यमा कमजोर अवस्थामा पुगेको भाजपाका लागि पुलवामा आक्रमण संजीवनी बुटी सावित भएको छ । विभिन्न सर्वेक्षण अनुसार दोस्रो पटक सत्ताको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको योजना सफल नहुने अवस्थामा पुगेको थियो । तर अहिले उनी प्रति पाकिस्तान बिरोधी जनमत तानिएको छ । फलस्वरुप मोदीले पाकिस्तानसंगको दुरी झनझन् बढाउन चाहन्छन् । त्यसैले पनि भारत र पाकिस्तानबीचको द्वन्द्व कम हुने अवस्थामा छैन् । पुलवामा आक्रमणपछि मोदीका जुनसुकै कदम आएका छन ती कदमका पछाडि चुनाव केन्द्रीत जनमत आफूमा तान्ने प्रयास भएको प्रमुख विपक्षी कंग्रेससहितका दलले आरोप लगाउन थालेका छन् । तर विपक्षीले पनि पाकिस्तान बिरोधी भावनालाई आफू तर्फ तान्न प्रयास गरेको देखिएको छ ।
के हो काश्मीर विवाद
काश्मीर विवादका विषयमा बुझ्नका लागि फर्किएर सन् १९४७ पुग्नै पर्ने हुन्छ । देश भागबण्डाका बेला त्यतिबेला लामो बहस भएको थियो । काश्मीरका अन्तिम राजा हरि सिंहलाई पाकिस्तान तर्फ जाने वा भारत तर्फ भन्नेमा निक्कै समय लागेको थियो । उनी हिन्दु राजा थिए भने काश्मीरमा बहुसंख्यक मुसलमानको बसोबास छ । अन्तिममा उनले भारत तर्फ जाने निर्णय लिएका थिए । त्यतिबेला पाकिस्तानले आफ्ना सैनिकलाई काश्मीरबाट फिर्ता बोलाउन अस्वीकार गर्यो । सन् १०५० मा चीनले पूर्वी काश्मीर अक्साइचीनलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएका थियो । अन्ततः ठूलो भूभाग भारतमा र दोस्रो ठूलो भूभाग पाकिस्तानका रुपमा कायम भए । भारत र पाकिस्तानबीच दोस्रो पटक सन् १९६५ मा युद्ध भएपछि काश्मीर अशान्त हुन थाल्यो । बिस्तारै काश्मीरमा भारतीय शासन विरुद्ध प्रदर्शन भयो । पाकिस्तानले त्यहाँका जनताको चाहना अनुसार जनमत संग्रहबाट निर्णय लिनुपर्ने तर्क सारेको छ भने भारतले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ ।
संयुक्त राष्टसंघले सन् १९५० देखिनै काश्मीर क्षेत्रका नागरिकबीच जनमत संग्रह गर्नु आवश्यक रहेको बताएपछि पाकिस्तानले त्यसको स्वागत गर्यो र राष्टसंघको कुरालाई अगाडी सार्यो । बहुसंख्यक अर्थात ६० प्रतिशत मुसलमान रहेको काश्मीरमा जनमत संग्रह गर्दा आफू हारिने निश्चित जस्तै भएकाले भारतले बल प्रयोगको नीति अगाडि सारेको छ । अहिलेसम्म काश्मीरमा हजारौंले ज्यान गुमाएका छन् । बिस्तारै काश्मीरको भूमि चरमपन्थीका गतिविधिका लागि उर्वर मैदान भएको छ । अघिल्लो वर्ष मात्र ५ सय भन्दा धेरै मानिसको काश्मीरमा सुरक्षाकर्मी र चरमपन्थीको आक्रमणबाट मृत्यु भएको थियो । पाकिस्तानले बिद्रोही समूहलाई साथ दिएको र आफ्ना सुरक्षाकर्मी विरुद्ध परिचालन गरेको भारतको आरोप रहँदैं आएको छ । पाकिस्तानले भने त्यहाँका नागरिकको भविष्य स्वयंम उनीहरुलेनै तय गर्नुपर्ने राष्टसंघको मान्यतालाई कार्यान्वयन गरेर स्थायी शान्ति कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेको छ ।
युद्धको असर नेपालमा
भारत र पाकिस्तानबीच जस्तोसुकै युद्ध भएमा त्यसको सोझो असर नेपालमा पर्ने गर्छ । लाखौंको संख्यामा रहेका नेपाली मुलका भारतीय सेना र गोर्खा सेना अहिले भारत पाकिस्तान सीमा क्षेत्रमा तैनाथ भएका छन् । युद्धको अवस्थामा भारतको पहिलो रोजाईमा गोर्खा सैनिक पर्ने गर्छन । त्यसैले जुनसुकै युद्धका कारण नेपाली नागरिक र नेपाली मुलका भारतीयले ज्यान गुमाउनु पर्ने बाध्यता जस्तै बनेको छ । पहिलो र दोस्रो विश्व युद्धमा मात्र होइन भारत पाकिस्तानबीच भएका पटक पटकका युद्धमा हजारौं नेपालीले ज्यान गुमाएका छन् । जम्मु काश्मीर क्षेत्रमा हजारौं गोर्खालीले ज्यान गुमाएका छन् । अहिलेको युद्धले समेत नेपाली नागरिकको ज्यान जाने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले नेपालका तर्फबाट दुवै देशलाई युद्ध गर्नबाट रोक्ने प्रभावकारी पहल स्थापित गर्नुपर्नेमा परराष्टविद्ले जोड दिएका छन् ।
भारत र पाकिस्तानबीचको द्वन्द्वका बारेमा लामो समयदेखि अध्ययन गरिरहेका परराष्ट्रविद् उद्धव प्याकुरेलले नेपालले दुई देशको शान्तिका लागि प्रभावकारी पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।सार्कको अध्यक्ष देशका हैसियतमा मात्र नभएर छिमेकी देशको हैसियतमा समेत शान्तिका लागि पहल गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । नेपालबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत र पाकिस्तानको भ्रमण गरेर शान्तिका लागि पहल गर्दा यसको सन्देश संसारभर सकरात्मक हिसाबले राम्रो हुने परराष्टविद्हरुको भनाई रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री तहबाट भ्रमण नभए पनि प्रधानमन्त्रीको दूतको रुपमा परराष्टमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई भारत र पाकिस्तानको भ्रमण गराउनु राम्रो हुन्छ । युद्धको सबैभन्दा ठूलो असर भारत पाकिस्तानपछि नेपालमा पर्ने भएकाले नेपालको भूमिका तटस्थ तर समन्वयकारी हुनुपर्नेमा प्याकुरेलको जोड छ ।
दक्षिण एशियामा भारतको दादागिरी
पाकिस्तानसंग मात्र होइन भारतले नेपाल लगायत आफ्ना सबैजसो छिमेकी देशमा दादागिरी देखाउने गरेको छ । भारतीय चर्चित पत्रकार विशाल अरोराले भाजपा नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन भएपछि छिमेकीसंगको सम्बन्ध झन्झन् कमजोर भएको बताएका छन् । उनले मोदीले दक्षिण एशिया खासगरी आफ्ना छिमेकी देशमा दादागिरी देखाउन खोज्दा सम्बन्धनै धरापमा परेको बताएका छन् ।
पाकिस्तानसंगको द्वन्द्वलाई पनि मोदीले चुनावी हतियार बनाउन खोजेको उनको दावी छ । पत्रकार अरोराकै कुराले के पुष्टि गर्छ भने भारतले छिमेकी देशमा आफ्नो प्र्रभुत्व जमाउन खोजिरहेको छ । जलस्रोतका हरेक कुरामा भारतमा निर्भर रहेको भुटानसंग उसको सम्बन्ध तुलनात्मक रुपमा राम्रो देखिन्छ ।
पाकिस्तानसंग वर्षौदेखि नराम्रो सम्बन्ध भएको भारतका लागि नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंका र माल्दिभ्समा समेत बिरोधी पक्ष बलियो अवस्थामा रहेको छ । यसको मुख्य कारण समाजिक आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रमा मात्र होईन भारतले प्राकृतिक स्रोत साधन, सीमा लगायतका क्षेत्रमा समेत हेपाहा दृष्टिकोणले हेर्ने गरेको छ । फलस्वरुप नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंका र माल्दिभ्समा समेत भारत बिरोधी पक्ष बलियो छ । बंगलादेश र श्रीलंकासंग लामो समयदेखि भारतको सम्बन्ध राम्रो हुन सकिरहेको छैन । माल्दिभ्समा भारतले समर्थन गरेको पक्ष सत्तामा आएपछि त्यहाँका जनता भारत बिरोधी भावनामा रम्न थालेका छन् । भारतको सीमा जोडिएको चीनसंग त झन सम्बन्ध राम्रो हुने कुरै भएन् ।
सम्बन्ध राम्रो बनाउनका लागि अरु देशको विश्वास जित्नुपर्नेमा भारतले विभिन्न प्रकारका दबाब दिने गरेको छ । नेपाल र माल्दिभ्समा नाकाबन्दी, बंगलादेश र श्रीलंकामा राजनीतिक हस्तक्षेपको प्रयास, भुटानमा राजनीतिक हस्तक्षेप गरेर आफ्नो अनुकुलको सरकार गठन, चीन र पाकिस्तानलाई स्थायी सत्रुका रुपमा व्यवहार गर्ने भारतको परराष्ट नीतिका कारण भारत दक्षिण एशियामा एक्लिदै गएको छ । छिमेकी देशका नागरिकले भारतलाई हाम्रो मित्र हो, सम्बन्ध राम्रो छ भन्ने पाउन मुस्किल पर्छ । त्यसैले सजिलै भन्न सकिन्छ भारतले दक्षिण एशियामा दादागिरी देखाईरहेको छ । दादागिरी देखाएका कारण उसलाई अन्यदेशले घमण्डी मित्रको रुपमा व्यवहार गर्न थालेका छन् । जुन भारतको हितमा नरहेको भारतीय विश्लेषकहरुले बताएका छन् ।
भारतका लागि खुलेर समर्थन गर्ने अहिले एकमात्र देश भुटान हो । तर त्यहाँ पनि पहिले जिग्मेसिंगे वाङ्चुक प्रधानमन्त्री भएका बेला सम्बन्धमा आएको दरार अझै पुरिएको छैन् । दोस्रो संसदीय चुनावका बेला ग्याँसमा दिदैं आएको सहुलियतदर भारतले खारेजी गरेपछि भुटान चरम संकटमा परेको थियो । त्यही ग्याँस संकटका कारण भारतीय समर्थक छिरिङ तोग्वेले चुनाव जिते । वाङ्चुकले भारतको बिरोध गरेकाले उनलाई राजनीतिबाट पाखा लगाउनु भारतको मुख्य उद्देश्य रहेको थियो । सत्ता आफू समर्थक भएपनि अहिले भुटानमा पनि भारत बिरोधी एउटा ठूलो हिस्सा रहेको छ । तर भुटानले चीनको बिरोध गर्ने भएका कारण भारतसंग अहिले मित्रवत व्यवहार देखाइरहेको छ । समयबद्धबाट
भारतीय विदेश सचिव र प्रधानमन्त्रीविच शिष्टाचार भेट
क्रिस्टियान्डो रोनाल्डोको जुभेन्ट्सका डिफेन्डर डानिलीमा...
क्रिस्टियानो रोनाल्डो जस्ता अन्य स्टार फुटबल खेलाडीको क्लब जुभेन्ट्सले डिफेन्डर...